Android app များဖွံ့ဖြိုးဆဲ၏အကြံပြုနှင့်အဆင်ပြေလမ်း, Java programming language ကိုအသုံးပြုနေသည်. ဂျာဗားအထွေထွေရည်ရွယ်ချက် tool ကိုဖြစ်သော်လည်း, ဒါကြောင့် Android ကို Software Development Kit နှင့် တွဲဖက်. အသုံးပြုသည် (SDK ကို) အန်းဒရွိုက်စတူဒီယိုပတ်ဝန်းကျင်တွင် apps များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့. အဆိုပါဇာတိ Development Kit နှင့်အတူ C ++ ကိုအသုံးပြုနောက်ထပ်အရာရှိတဦးကလမ်း (NDK).
ဒီ option ကထိုကဲ့သို့သောအထိခိုက်မခံယာဉ်မောင်းအခြိနျဇယားအဖြစ် low-level ညွှန်ကြားချက်တွေနဲ့ apps များဖွံ့ဖြိုးအသုံးပြုသည်. C ++ တို့နှင့် NDK နှင့်အတူ, ကျနော်တို့ကိုတိုက်ရိုက်ကုဒ်အရှည်နှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးကုန်ကျစရိတ်လဲလှယ်အတွက်ထိရောက်မှုတိုးပွားလာဤအရပ်က Android kernel ကိုအပေါ် app ကို run နိုင်ပါတယ်.
ထို့အပြင် Xamarin တူသော Third-party tools တွေရှိပါတယ်တည်ရှိ, Cordova နှင့် app များကိုဖွံ့ဖြိုးဆဲဘို့ဇာတိရင်တွင်းစကား. ဤရွေ့ကားပလက်ဖောင်းအဆင်ပြေသည်, သို့သော်, တစ်ဇာတိကဲ့သို့သောစွမ်းဆောင်ရည်ပုံမှန်အားဖြင့် Third-party tools များအားဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးအဆိုပါအက်ပ်များမှမျှော်မှန်းထားသည်မဟုတ်ပါ.
ကျနော်တို့က Android app များကိုဖွံ့ဖြိုးဆဲ၏စံများနှင့်တာဝန်ရှိသူတဦးကလမ်းအသုံးပြုလိမ့်မည်: Android SDK နှင့်အတူ Java နဲ့ကျနော်တို့က Android Studio ကပေါင်းစည်းဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီပတ်ဝန်းကျင်ကိုသုံးပါလိမ့်မယ် (ဒီမှာ) ဒီအလုပ်. ဂျာဗား၏အခြေခံကိုလည်းရှင်းပြခဲ့ကြောင့်သင် "ကိုစတင်ဂျာဗားသိရန် t ကိုလိုအပ် Don.
သငျသညျအခြေခံနားလည်သဘောပေါက်ကြောင်းသေချာပါအသစ်တစ်ခု programming language ကိုသင်ယူစဉ်ကပျောက်ဆုံးသွားရရန်အလွန်လွယ်ကူသောကြောင့်ငါ "ငါသည်သည်အထိရှုပ်ထွေးဘာသာရပ်များမိတ်ဆက်ပေးမပေးကြည့်". သငျသညျ "ဒီ post ကိုအတူထိုကဲ့သို့သောအခြေအနေမျိုး၌မကျရမည်ကြည့်.
ငါ "ဖြစ်နိုင်သမျှအရိုးရှင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုအသစ်သဘောတရားများကိုသင်ပေးဖို့ကြိုးစားကြည့်. t ကိုတစ်ဦး programming language ကိုသင်ယူ non-ရပ်တန့်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကြောင်းကိုမေ့လျော့ "Don ကျေးဇူးပြု., ဒါဟာအဆုံးသတ်ဘယ်တော့မှနှင့်ဤစာအုပ်ကိုသင်အလွယ်တကူစတင်ရန်ကူညီပေးပါမည်.
ယခု, သင်ရည်ရွယ်ချက်နှင့်ဤစာစောင်၏နည်းလမ်းကိုသိကြ. "့ကော်ဖီချိုးရှိခြင်းပြီးနောက်လာမည့်အခနျးမှာက Android Studio က၏ installation ဆက်လက်ကြစို့.
ယခင် Post မှ:001-အန်းဒရွိုက် App ကိုဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီမှနိဒါန်း